N'aka ozo, enwere ike idozi ihe dika ihe onyonyo dika odi ihe ndi ahu. A bụ ihe a video na-akọwa ihe mere imewe bụ nakwa ihe mere gị ụlọ ọrụ ga-emejuputa atumatu ya. Anyị na-adịbeghị anya redeveloped na DK New Media saịtị na-anabata ma na-arụ ọrụ ugbu a Martech Zone ime otu ihe!
Ihe nchọgharị maara na nha ha, yabụ ha na-ebupụta mpempe akwụkwọ ahụ site na elu ruo na ala, na-ajụ ụdị ndị kwesịrị ekwesị maka oke ihuenyo ahụ. Nke a apụtaghị na ị ga-ekepụta ụdị akwụkwọ dị iche iche maka ihuenyo ọ bụla, naanị ị ga-agbanwe ihe ndị dị mkpa.
Nke a bụ ihe infographic si Monetate na-egosipụta uru ndị dị na ịmepụta otu nzaghachi na-anabata maka ọtụtụ ngwaọrụ:
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ ebe nrụọrụ na-eme ihe, tụọ gị Google Chrome nchọgharị (Ekwenyere m na Firefox nwere otu atụmatụ) na- DK New Media. Ugbu a họrọ Lee> Onye Mmepụta> Ngwaọrụ Onye Mmepụta site na menu. Nke a ga-ebu ụyọkọ ngwaọrụ na ala nke ihe nchọgharị ahụ. Pịa na obere akara ngosi mkpịsị aka ekpe nke aka ekpe nke menu mmanya Mmepụta.
Nwere ike iji nhọrọ igodo nsoro gbagoro wee gbanwee echiche site na odida obodo gaa na eserese, ma ọ bụ ọbụna họrọ ọnụọgụ ọ bụla nke ụdị nlele anya. Nwere ike bubatagharịa ibe ahụ, mana ọ bụ ngwa ọrụ kachasị mma n'ụwa maka ịnwale ntọala ị na-anabata ma hụ na saịtị gị dị oke mma na ngwaọrụ niile!
Nchịkọta weebụ abụghị nhọrọ nke webmasters ọzọ, ọ bụzi iwu na ha. Daalụ maka ịkekọrịta ozi a.
Jun 2, 2021 na 6:04 AM
Daalụ ọtụtụ Douglas maka edemede a kọwara nke ọma. Ekwesịrị m ikwenye na nke a n'agbanyeghị na ọdịnaya ọdịnaya nke ihe. Maka ọtụtụ saịtị anyị na-eme nhazi nke ga-ezughi ezu. Anyị chọrọ ọdịnaya nzaghachi. Mana maka weebụsaịtị ndị ọzọ anyị ga - ejide n'aka na ị ga - eji ederede ederede ederede banyere otu esi ejikwa nke a!
Echere m na ị zuru oke, Aaron. O zughi naanị ịhazigharị na ibugharị ihe… ọ dị mkpa ka anyị jiri ọdịnaya rụọ ọrụ nke ọma.